Mpanamboatra sy mpamatsy vahaolana EOD | China EOD Solution Factory
HW-400 EOD Robot no hany robot EOD habe sy salantsalany izay manana famolavolana gripper avo roa heny, fiasan'ny fomba fijery marobe, ary miaraka amina fanarenana, famindrana ary fanariana. Amin'ny maha robot EOD habe azy, ny HW-400 dia manana habe kely, milanja 37kg fotsiny; saingy ny fahaizany miasa dia nahatratra ny fenitry ny robot EOD salantsalany, ary ny lanjany lehibe indrindra dia hatramin'ny 12kg. Ny Robot dia tsy hoe matanjaka sy maivana amin'ny rafitra fotsiny, fa mahafeno ny fepetra takian'ny tafika amin'ny lafiny maro toy ny fisorohana vovoka, fiarovana amin'ny rano ary fiarovana amin'ny harafesina.
Ny suit Search dia natao manokana ho an'ny mpiasa mitady sy manadio ireo toeram-pitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny fitaovana mpampihorohoro. Na dia tsy manome fiarovana ambony aza ny Suit Suit amin'ny fanodinana ny baomba EOD, dia maivana kokoa noho ny lanjany, manome fiarovana amin'ny manodidina, ahazoana aina ny mitafy ary mamela hetsika tsy voafetra saika. Ny fikarohana Suit dia misy paosy eo anoloana sy any aoriana izay azo ampidirina lovia fragmentation tsy voatery. Manatsara ny haavon'ny fiarovana omen'ny fikarohana Suit.
Ny UMD-II dia mpamantatra vy marobe marobe ilaina amin'ny mpampiasa polisy, miaramila ary sivily. Izy io dia mitaky ny fepetra takiana amin'ny sehatry ny asan-jiolahy sy ny fikarohana ny faritra, ny famafana baomba mipoaka. Ankatoaviny sy ampiasain'ny serivisy polisy manerantany. Ny detector vaovao dia manolotra fanaraha-maso notsorina, endrika ergonomika nohatsaraina ary fitantanana bateria mandroso. Izy io dia mahatohitra ny toetr'andro ary natao haharitra maharitra amin'ny fampiasana azy amin'ny tontolo henjana ary manome fahatsapana avo lenta.
(Karazana tranofiara) Ny fitoeran'entana famonoana baomba boribory (voalaza eto ho toy ny vokatra na fitoeran-tsindrona baomba) dia natao hanakanana ny onja nipoaka vokatry ny fipoahana baomba sy ny vonoan'ireo potipoti-javatra tamin'ny tontolo manodidina. Ity vokatra ity dia misy fitoeran-tseranana famonoana baomba sy tranofiara hitaterana ireo zavatra mipoaka. Ity vokatra ity dia be mpampiasa amin'ny seranam-piaramanidina, seranana, gara, metro, kianja, toerana fampirantiana, kianja, ivon-toeran'ny fihaonambe, toerana fanaraha-maso fiarovana, sambo mpandeha sy entana, fiarandalamby hitahiry entana ahiana hipoaka sy mampidi-doza, na hamindra, hitaterana zavatra mampidi-doza. , azo ravana mivantana ao anaty tanky ihany koa. Izy io koa dia azo ampiharina amin'ny fitehirizana sy fitaterana fitaovana fanombohana amin'ny orinasa miaramila, tafika ary toeram-pitrandrahana sns.
Ny Water Jet Explosive Devices Disrupter dia fitaovana ampiasaina hanelingelenana ireo fitaovana mipoaka improvisy izay azo inoana fa hisorohana ny fanapoahana na ny fipoahana. Izy io dia misy barika, buffer, fahitana laser, nozera, projectile, tripod, tariby, sns. Namboarina manokana ho an'ny olona EOD sy IED ny fitaovana. Ilay mpanakorontana dia misy kaontenera misy rano natokana ho azy. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index. Ny jiro laser omena dia mamela ny tanjona kendrena. Ny tripod miaraka amin'ny mekanisma fijanonan'ny kodiarana dia manome antoka fa tsy hihemotra na hianjera ilay mpanelingelina rehefa mitifitra. Ny tongotra natao manokana dia azo ahitsy mba hanitsiana ny toerana fiasana sy ny zoro. Bala efatra samihafa no misy: rano, spading, vera organika, bala totohondry.
Ity vokatra ity dia mampiasa fitaovana fanamafisana buffer mitroka angovo manokana, ary manamboatra dinganà fanjairana manokana hahazoana antoka ny fifohana tanteraka ny angovo ateraky ny sombin-tsipoapoaka mipoaka, izay afaka manakana ireo sombin-javatra, ireo ampahan'ny fitaovana mipoaka ary tariby namboarina nandritra ny fizotran'ny fipoahana, mitahiry tsara porofo, ary famahana tranga mety sy fanangonana porofo.
Ny vokatra dia misy lamba firakotra-porofo sy fefy porofon-fipoahana. Ny fotony anatiny amin'ny lamba firakotra-porofo sy fefy porofon-tsofoka dia vita amin'ny fitaovana manokana, ary ny lamba voatenona matanjaka dia ampiasaina ho lamba anatiny sy ivelany. Ny lamba PE UD miaraka amin'ny fahombiazan'ny porofo mipoaka dia nofinidy ho fitaovana fototra, ary misy ny zaitra manokana manara-penitra mba hiantohana ny fifohana tanteraka ny angovo vokarin'ny sombin-tsipoapoaka.
Ny Advanced Hook and Line Tool Kit dia fitaovana manokana matihanina rehefa mamindra ny zava-misy mampiahiahy. Ny Kit dia misy kojakoja avo lenta, farango vy tsy misy fangarony, kiritika avo lenta, tady fibre avo lenta ambany sy fitaovana ilaina hafa natao manokana ho an'ny Device improvised explosive (IED), ny fivezivezena lavitra ary ny fikirakirana lavitra.
Ny Hook & Line Kit dia manome teknisiana baomba manana fitaovana marobe izay azo apetraka hahazoana fidirana sy hanala, hampiasana ary hikirakira fitaovana mampiahiahy mampiahiahy ao anaty tranobe, fiara, ary koa amin'ny faritra malalaka.
Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Masinina scanner X-Ray azo entina, Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina, Fakan-tsary fakan-tsary, Fitaratra fitiliana fiara, Scanner X-Ray Portable,